Izindaba - Izintambo Ezivuselelwe kabusha zePolyester
Indwangu yePolyester Microfiber
Indwangu yePolyester Minimatt
Indwangu yePolyester Oxford
Indwangu yePolyester Pongee
Indwangu yePolyester Taffeta
Indwangu yePolyester Taslan
Indwangu yePolyester Twill Lining
Izintambo ze-Polyester ezenziwe kabusha
I-Polyester iyi-fiber eyenziwe ngabantu, eyenziwe ngemikhiqizo ye-petrochemical ngenqubo ebizwa nge-polymerization. Ngama-49% womkhiqizo we-fiber womhlaba, i-polyester iyintambo esetshenziswa kakhulu emkhakheni wezembatho, minyaka yonke kukhiqizwa amathani angaphezu kwezigidi ezingama-63,000 we-polyester fiber. Indlela esetshenziselwa ukuphinda isebenze kabusha ingaba yimishini noma yamakhemikhali, ne-feedstock equkethe imfucumfucu yangaphambi noma yangemva komthengi engasakwazi ukusetshenziselwa inhloso yayo. I-PET isetshenziswa njengento eluhlaza ye-polyester eyenziwe kabusha. Le nto iyasetshenziswa nasemabhodleleni amanzi acacile epulasitiki, futhi ukuyisebenzisa kabusha ukuze ifinyelele endwangwini kuyigwema ukuthi ingayi endaweni okulahlwa kuyo udoti. Izingubo ezikhiqizwe kusuka ku-polyester ezenziwe kabusha zingaphinde zenziwe kabusha ngaphandle kokuwohloka kwekhwalithi, zivumele ukunciphisa ukumoshwa, okusho ukuthi umenzi wezingubo angaba uhlelo oluvaliwe lweluphu, i-polyester ingahlala isetshenziswa kabusha iphinde isetshenziswe kabusha.
Imakethe yomhlaba wonke ye-Recycled Polyester Fibers imakethe igxile ekuhlanganiseni ubufakazi obukhulu bezibalo zomkhakha we-Recycled Polyester Fibers njengoba unikeza abafundi bethu ukwengezwa kokubaluleka ekubaqondiseni ekuhlangabezaneni nezithiyo ezizungeze imakethe. Ukwengezwa okuphelele kwezinto eziningana ezifana nokusatshalaliswa komhlaba, abakhiqizi, usayizi wemakethe, nezici zemakethe ezithinta iminikelo yomhlaba kubikwa ocwaningweni. Ngaphezu kwalokho ucwaningo lwe-Recycled Polyester Fibers lubuye ludlulise ukunaka kwalo ngokujula komhlaba okuncintisanayo, amathuba okukhula achaziwe, amasheya ezimakethe ahambisana nohlobo lomkhiqizo kanye nokusetshenziswa, izinkampani ezibalulekile ezibhekele ukukhiqizwa, namasu asetshenziswayo nawo ayamakwa.
Isikhathi Iposi: Dis-30-2020
Amadivayisi: No.15-11, Tangkang Road, Yuhang District, Hangzhou, China
Umbala wePantone weye ...
NguSophie Cannon Disemba 9, 2020 | 12:47 pm | I-Updated Enlarge Image Imibala emibili yePantone Yonyaka imele amathemba aqhakazile we-2021 - ngenkathi ivuma izinto ezibuhlungu zango-2020.
Kungani izinto ezinhle kakhulu zekhokho elenziwe ekhaya ...
Ukuhlukahluka kwezindwangu, ukulingana, nokuziphatha komsebenzisi kungathonya ukuthi imaski ingavimba kanjani ukusabalala kwegciwane nguKerri Jansen APRIL 7, 2020 Ngamacala we-COVID-19 akhula ngokushesha e-US futhi akhuphuka ...
I-Polyester iyi-fiber eyenziwe ngabantu, eyenziwe ngemikhiqizo ye-petrochemical ngenqubo ebizwa nge-polymerization. Ngama-49% womkhiqizo we-fiber womhlaba jikelele, i-polyester iyifayibha esetshenziswa kakhulu ku ...
JOYINA IPHEPHA LETHU